Sidee loo yareeyaa rabitaankaaga galmada? | Ragga Stylish
Rag badan ayaa jeclaan lahaa inay helaan waqti kasta galmo badan noloshaada oo dhan, laakiin waxaa jira kuwa kale oo runtii raba inay jaraan.
Adoo yeelanaya mid kamid ah qeybaha lamaanaha rabitaan galmo badan, jawi kacsan ayaa laga dhex abuuri karaa labadooda maadaama rabitaanka udhaxeeya uu yahay mid aan sinnayn. Kordhinta libido ee mid ka mid ah lamaanayaasha waxay horseedi kartaa inaad ka raadsato dadka kale rabitaanka u dhigma kanaga.
Xalka mid ka mid ah waxaa ka mid ah kordhinta rabitaanka galmada ee qofka kale. Xalka kale wuxuu ku lug leeyahay yaraynta heerka galmada ee qofka kale. Si kastaba ha noqotee, weligood ma jiri doonaan laba qof oo isku jinsi ah, marwalba way kala duwanaan doonaan Labada qof ee isqaba waxay heli karaan waxyaabo kale ama waxay la hadli karaan khabiirada cilmiga jinsiga si ay xal ugu helaan mashaakilkooda galmada halkii ay kala qaybin lahaayeen. Si loo yareeyo libido, waxaad sameyn kartaa dhaqdhaqaaq jir ahaaneed, kubbadda cagta ama dabaasha si aad udajiso rabitaanka galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee loo yareeyaa rabitaanka galmada?
Maqaalkani ma dhahayo waxba. Kaliya labada sadar ee ugu dambeeya waxaa ku xusan labo waxqabad oo "loo malaynayo" kuwaas oo kaa caawin doona yaraynta rabitaanka galmada (sida kubbadda cagta ama dabaasha). Aniguna waxaan leeyahay "waa loo malaynayaa" maadaama maqaalku aanu soo bandhigin tixraacyo ama bog internet ama wax cilmi ah oo ku saabsan labadan hawlood; waxay kaliya u magacawdaa iyaga sidii wax dhacdo ah. Halkaas ayaan mid kale kuu dhigay: raadinta tirooyinka daruuraha sidoo kale waxay kaa caawineysaa yareynta rabitaanka galmada ... halkaas ayaan kaga tagayaa ...
Waan ku raacsanahay waxa Leo leeyahay. Anigu waxaan ahay haweeney waxaan haystaa waqti aad u adag oo aan weheliyo. Markii aan haystay, hamigeygu wuu ka sarreeyay waxa sida caadiga ah loo dejiyo haweeneyda, laba ama saddex jeer habeenkii, jirka oo aan ku qanacsanayn, shucuur aan la xakamayn karin, lama aqbali karo in dadku u maleeyaan bullaacadda sidaas. waxa lagama maarmaanka ahi waa inaad dareento caafimaad dhan. sidee jahannamada u helayaa taas? - aquarium39-log.
Waxay ii shaqeysay inaan kordhiyo libido-ka lammaanaha kale, hadda iyadu waa tan aniga i raadineysa.Kaftanku wuxuu lamid yahay sidii loo kordhiyo libido-keeda waana run inayna ku xusin hal farsamo tan.
Ku jawaab cabronazo
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku ogaado
Run, dadku waxay raadsadaan ra'yi (waxna tari mayso, caawinaad waxaa siiya cilmiga jinsiga) waxayna u arkaan nasiib darro.
Ku jawaab CargadoTolDia
Waad ku mahadsan tahay dhammaan macluumaadka la bixiyay, mar dambe uma baahni inaan baarto shabakadda. XALALKA WALAAL AMA WAX KASTA OO AAD TAHAY IN SAWIRKU KA TAGO SU'AALO BADAN.
Ku jawaab Francisco Caracas
Shineemo 69 dijo
Si loo yareeyo libido, u qaado kaniiniyada ka hortagga uurka ee ragga livido low.
Jawaab Shineemo 69
... Sida kaniiniga ah, waxaan xiiseeyaa inaan waxbadan ogaado, ma doonayo inaan khiyaamo xaaskeyga ... waxaan doorbidayaa inaan naftayda u huro kaliya inaan shaqeeyo ...
Jawaab Niun Brillo
Saaxiibayaal waxaan moodayay inaan ahay kan kaliya ee aan doonayo inaan xakameeyo waxyaabahaas kacsiga ah, wuu i siigaystay ku dhawaad ​​sedex jeer maalintii wixii aan kula talin karaana waa inaan sameynayo waa inaan joojiyo filimada qaawan mudo ah maadaama ay waxyeello u leedahay sida Niun Brillo oo kale ma doonayo inaan iskaga tago lammaanahayga
Waxaan ahay 43 sano jir ninkeygu waa 44 waan faraxsanahay maalintii oo dhan waxaan qabaa libido sare mana garanayo sababta uu jacaylka ii siiyo laakiin maxaa yeelay waxaan la joogaa kiilo badan oo dheeri ah. Miyaanan dareemi karin wax aad u kulul markaan sidaa u kululahay oo la samayn karo
Muxuu ahaa maqaal xun, sida muuqata waxay ku qoreen 5 daqiiqo.
Waan jeclahay xaaskeyga laakiin marwalba waxay laheyd rabitaan galmo oo hooseeya, sanado badan aamin ayaan sii ahaaday laakiin dhib badan ayaan kala kulmay tan darteed, waxaan horey u soo joognay 10 sano mana doonayo inaan sii wado dhibaatada iyo tan iyo markii aan doonayo inaan noqdo iyada iyada waxaan u baahanahay inaan ka yareeyo rabitaanka galmada ugu yaraan si aanan mar dambe ugu baahnayn inaan ka shaqeeyo dareenkeyga markasta, waxaan doonayaa inaan ka baabi'iyo galmada madaxayga oo aan awoodo inaan ka fikiro waxyaabo kale meeshiisa. Sideen fikirka uga baabiiyaa maskaxdayda?
Ilaah raadso dijo
Waxaan bilaabay inaan gabar la galmoodo waxaan qabaa xaaskeyga laakiin waxaan ogaaday inaan xumahay xitaa hadii libidokeyga uu ugu badnaado oo aan shaqeeyo, waxaan aqriyaa buugaag waxaanan aadaa socod lug ah mana baxo, aniga kaliya eeg xoogaa dabada ah guriga ayaan galaa waxaanan tuurayaa xaaskeyga xaaskeyguna waa qurux badan tahay laakiin libido ayaa ku yar waana inaan aado midka kale ee lugaha furan igu sugaya way adagtahay laakiin ilaahay baan raadiyay halkaasna waan Waxaan helay nabad iyo xasillooni markasta oo aan dareemo in aan dhacayo waxaan qorayaa balan kitaabi ah waxaanan sifiican ula dareemayaa xaaskeyga oo iyadana ila joogtaa nasiib haddii aad awoodid haddii aad rabto inaad iska ilowdo rabitaanka galmada ee xad-dhaafka ah
Ka Jawaabo Raadinta Eebbe
Geez, waxaan moodayay inay jiraan dad kooban oo dhibaatadaas qaba. Aniga iyo waxaan isku dayay waxyaabo badan laakiin natiijo fiican la'aan. Waxaan rajaynayaa inaan helo kiniinno aan fartaada hoos u dhigo, xaaskeygu isma adkeyn karto, gaalnimaduna xal ma ahan.
Ku jawaab Ashirama
Waxaan raadinayaa waddo aan ku yareeyo ama ku baabi'iyo rabitaanka galmada, waxaan ahay nin 38 jir ah oo libido-kayga aad ayuu u sarreeyaa, mana haysto lammaane aniga ii ah jirdil, waxaan isku dayay habab kala duwan oo aan waxba ahayn, mararka qaarkood aniga Waxaan ka quustay inaan ahaado sidaas, mar dambe ma rabo inaan masturbay, maxaa yeelay taasi waxay iga dhigeysaa inaan wax badan sii doonayo. Laakiin waxaan sii wadi doonaa raadinta waddo aan ku baabi'iyo hamiga.
Waan ogahay inay jiraan dawooyin yareeya rabitaanka, laakiin sidoo kale waan ogahay inay saamayn ku leedahay caafimaadka
Waxaan rabaa badal dabiici ah
Waxaan ahay 37 sano jir waxayna dhibaato igu keentay xaaskeyga weligey kuma fikirin in ay dhici doonaan kiisas sidan oo kale ah
maanta waxaan doorbidaa inaan naftayda ku koobo khaladaadka
Jawaab jorge luis b
Waan ku raacsanahay dhammaan faallooyinka. Maqaalku ma lahan nooc xal ah, laakiin ugu yaraan markaan aqrino faallooyinka waxaan ogaaneynaa in annaga oo keliya aan dhibaatada heysan, taasna xoogaa raaxo ah ayey siineysaa.
Isla taas ayaa igu dhacda, waxaan guursaday 10 sano, laba caruur ah, waan jeclahay xaaskeyga, laakiin iyadu waxay rabtaa xiriiro 3dii ama 5tii maalmoodba maalin walbana waxaan rabaa maalin walba hadii aysan aheyn labo jeer maalintii.
Aaminnimo la'aantu ikhtiyaar uma ahan, sidaa darteed waxaan baari doonaa waxay ka yiraahdeen kaniiniyada si aan isugu dayo yareynta hamigeyga.
Nasiib wacan qofkasta oo leh dhibaatadaada.
Anigu waxaan ahay 35 jir xaaskeyguna waa 33. Waxay leedahay rabitaan galmo oo aad u hooseeya aadna waan u sarreeyaa. Waxaan bartay sidaan u xakamayn lahaa iyo caawimaadda Eebbe. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waan taabtaa iyada oo aan dareemin oo aan seexdo oo aan siigeysto. Waa sidii fetis. Waxayna ku soo toostaa cabsi. Mar dambe ma doonayo inaan yeesho rabitaankaas. Oo waxaan doonayaa inaan xitaa ka saaro rabitaankayga galmada gebi ahaanba. Waan hubaa inaysan seegi doonin waana ku farxi karnaa iyada oo aan la sameyn.
Hello Anonymous. In kasta oo ay jiraan dawooyin baabi'in kara libido-ka nolosha, haddana waxaan qabaa inaan lagu talinayn, maxaa yeelay noloshu wejiyo badan ayey qaadataa. Fikradayda, fikirka ugu fiican ayaa ah in la helo isku dheelitirka oo aan ugu dhawaado sida ugu macquulsan ee libido lammaanaha.
Waxaan fahansanahay in arin kale oo wax laga qabanayo ay tahay isgaarsiinta. Dad badan ayay u tahay xaaraan inay ka hadlaan mowduuca lamaanahooda, waxay siiyaan wax, ama xanuun. Mana ahan qorshe si aad u tagto tuugsiga inaad galmo galmo laba labo u sameyso.
Waxaa jira dawooyin ka dhan ah timo luminta oo hoos u dhigta libido. Waxa kale oo ay faa iido leedahay in la xakameeyo waxa indhaha ka galaya, adoo isku dayaya inayan shukaansanin ama aad eegin waxyaabaha kordhinaya libido ... Way adkaan kartaa, laakiin waqtiga badan ee la dhaafaa way fududaanaysaa, sida ka soo horjeedka, akhlaaq xumada sawirrada ayaa la geliyaa indhaha way adkaan doontaa in la xakameeyo hamiga.
Waxay igu dhacday aniga oo militariga ah ... Aad baan u arkay wiilal oo aan u maleeyay inay wax uun cuntada geliyeen. Layaabkeygu wuxuu ahaa inaan ku dhameysto jikada waxaanan arkay naftayda inaysan waxba soo kordhin… Maskaxda oo dhan ayaa ku jirtay.
Xitaa haddii aadan rumaysanayn in mid guursado si uusan u gubin sida Kitaabka Quduuska ah sheegay, galmada waa qayb ka mid ah wada noolaanshaha guurka, waxay kaloo ka caawisaa inay si buuxda isugu xirnaadaan, haddii kale wax walba way qaboojiyaan midna wuu dhammaadaa lammaanahaaga oo ka hel aragtiyo ka wanaagsan kuwa kale marka loo eego haddii ay siiyaan ahmiyadda habboon galmada. Tanna kuma dhahayo galmadu waa wax walba oo lammaanaha ku jira laakiin waa qodob aasaasi ah oo qofka ka dhiga inuu yeesho QOYS.
U jawaab Wil Merino (mincambiandovidas.com)
Qaado aldactone 50 MG maalin kasta oo ka baabiin doonta testosterone jirkaaga kana takhalusi doonta rabitaanka galmada, haweenka waxaa loo isticmaalaa waxyaabo kale oo loogu talagalay finanka iyo hoos u dhigista cadaadiska
Anigu waxaan ahay qof waayeel ah, libido -na ma dhumin, taasina waxay dhibaato ku ahayd xaaskayga, xoogaa waa raaxo -darro, waxaanan doortay inaan helo hab aan ku yareeyo heerkaas testosterone, maxaa yeelay waan jeclahay xaaskayga.
Ka jawaab Jaime Rana